Messi oo isbadal weyn ka sameeyay taariikhda kooxaha Barcelona iyo Real Madrid… (Bal EEG wax qabadkiisa tan iyo 2004-tii) – Gool FM
(Spain) 25 Maarso 2019. Wargeyska Isbaanishka ah ee Sport ayaa muujiyay guusha xidiga reer Argentina ee Lionel Messi tan iyo bishii October/16/2004, kadib markii uu bedelay gabi ahaanba taariikhda labada kooxood ee ugu weyn aduunka iyo gudaha dalka Spain ee Real Madrid iyo Barcelona.
Wargeyskan, oo lagu tiriyo inuu si aad ah ugu dhowyahay kooxda Barcelona, ​​ayaa wuxuu uga mahad celiyay Lionel Messi sida uu ugu guuleystay inuu bedelo taariikhda labada kooxood Real Madrid iyo Barcelona, islamarkaana uu bedelay qaab ciyaareedka kooxda reer Catalonia tan iyo xiligaas.
Safarka Messi ee howlgalkan ayaa wuxuu kasoo bilaawday xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Barcelona, kadib markii uu kula guuleystay markiisii ugu horeeyay La Liga, wuxuuna tan iyo xiligaas kula guuleeystay 9 jeer horyaalka Spain.
Barcelona ayaa ku guuleysatay mudadii uu ku sugnaa Messi 33 koob, waxaana suuragal ah in xili ciyaareedkan uu kula guuleysto sidoo kale saddexleyda taariikhiga ah.
Hadaba koobabka uu ilaa iyo haatan kula guuleystay kooxda Barcelona ayaa kala ah 9 koob horyaalka La Liga ah, 6 Copa del Rey, 8 koob Spanish Super Cup, 4 koob tartanka Champions League, 3 koob UEFA Super Cup, 3 koob ee ah FIFA Club World Cup.
Ka hor 2004-tii, Real Madrid waxay ku guuleysatay 69 koob, halka Barcelona ay qaaday 54 koob, hadana Los Blancos waxay heysataa 89 koob, halka Blaugrana ay heysato 87 koob, hadii ay dhacdo in kooxda reer Catalonia ay xili ciyaareedkan soo xareyso saddexleyda taariikhiga ah waxay ka sara mari doontaa, dhigeeda ka dhisan caasimada Madrid oo ay si weyn ugu dagaalamaan kubadda cagta.